မတူတဲ့လူနဲ့ အတူနေရင် မတူတဲ့ဘ၀ကို ရမှာပဲ - အောင်သက်ခိုင်
Home » ဗဟုသုတ » မတူတဲ့လူနဲ့ အတူနေရင် မတူတဲ့ဘ၀ကို ရမှာပဲ
တကယ်လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဘယ်သူနဲ့ သင်ပေါင်းသင်းနေတယ်ဆိုတာက အရမ်းကို အရေးပါပါတယ်။ အဲဒီ ဘယ်သူက သင်ကြီးပြင်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်က သင့်အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါ လိမ့်မယ်။
မြင့်မြတ်သူနဲ့နေရင် အထွတ်အထိပ်ကို သင်ရောက်မယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်မှာ "လူဆိုတာ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကို နားလည်တဲ့ တစ်မျိုး တည်းသော သတ္တ၀ါဖြစ်တယ်။ အကောင်းဘက် သွယ်ဝိုက်တဲ့စကားတွေက လူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ စိတ် အခြေအနေကို အကောင်းဘက် သက်ရောက်စေတယ်။ ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးတွေကို လှုံဆော်ပေးတယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးတယ်။ ရှေ့သို့တက်လှမ်းစေတယ်၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်စေတယ်" အပျက် သဘောဆောင်သူတွေနဲ့ ဝေးနိုင်သမျှ ဝေးဝေးနေပါ။ နို့မဟုတ်ရင် သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အခိုးခံ လိမ့်ရမယ်။ သင့်စိတ်ဓာတ်တွေ ယိုယွင်းကုန်လိမ့်မယ်၊ တိုးတက်ချင်စိတ်တွေ ကုန်ခမ်းလိမ့်မယ်။
အပြုသဘောဆောင်သူတွေက နေမင်းကြီးနဲ့တူတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အလင်းရောင်ကို ဆောင် ပေးတယ်။ အပျက်သဘောဆောင်သူတွေက လမင်းနဲ့တူတယ်။ လပြည့်၊ လကွယ် အလင်းပေးတာတောင် မတူဘူး။စိတ်သဘောထားက အရာရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားရှိရင် ဘယ်လို အနာဂတ်ကို ရစေပါတယ်။ အကျင့်စရိုက်က ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ ဘယ်လို အကျင့်စရိုက်က ဘယ်လိုဘ၀ကို ရစေပါတယ်။တချို့ကပြောတယ်။ လူ့ဘ၀မှာ ကံကောင်းခြင်း သုံးကြိမ်ရှိသတဲ့။
တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့ အပြုံးတစ်ပွင့်၊ နွေးထွေးတဲ့စကားတစ်ခွန်းက သင့်ဘ၀ကို နေရောင်ခြည်နဲ့ လင်း လက်စေနိုင်တယ်။
ဘ၀မှာ ကံမကောင်းခြင်းဆိုတာက သင့်ဘေးမှာ အပြုသဘောဆောင်သူ၊ အကောင်းမြင်သူ ကင်းမဲ့လို့ဖြစ် တယ်။ ဝေးဝေးလှမ်းမြင်နိုင်သူ မရှိလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ဘ၀က အမှောင်ထဲမှာ အရောင်ပျောက် နေတာဖြစ်တယ်။စကားတစ်ခွန်းက ဒီလိုဆိုပါတယ်။
"သင်ဘယ်သူလဲ အရေးမကြီးဘူး။ အရေးကြီးတာက သင်ဘယ်သူနဲ့ အတူနေနေသလဲ" ဆိုတာဖြစ်တယ်။ ကြက်မ,၀ပ်လို့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ လင်းယုန်ဟာ သူ့ကိုယ်သူကြက်ပါဆိုပြီး ပျံသန်းခြင်းအတတ်ကို လက်လွတ်ခဲ့ တယ်။ အတောင်ဖြန့်ပြီး ကောင်းကင်ပြာပေါ် သူဘယ်လို ပျံသန်းဦးမလဲ?
မြက်ခင်းပြင်မှာ သူဘယ်လို့ ဒုန်းစိုင်းပြီး သားကောင်ရှာတော့မလဲ? အမှန်တော့ သင်ဟာထူးကဲသူပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ဘေးက အဆိုးမြင်သူကြောင့် ရှေ့သို့တက်လှမ်းချင်တဲ့ သင့်ခွန်အားတွေ ဆုတ်ယုတ်ကုန် တယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေ ညံ့ဖျင်းကုန်တယ်။
စာကောင်းတွေဖတ်တယ်၊ အသိပညာရှိသူဆီ ချည်းကပ်တယ်ဆိုတာ လူ့ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးကံနှစ်ခုဖြစ် တယ်။ လူ့ဘ၀ဆန်းကြယ်ပုံကို ဒီအရာနှစ်ခုနဲ့ သင်ယူနိုင်တယ်။ လက်ထဲ ဆောင်ထားနိုင်တယ်။ ဘ၀ရဲ့ လှပခြင်းဆိုတာ တစ်ပါးသူကို နှင်းဆီလက်ဆောင်ပေးတယ်။ ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်း နှင်းဆီရနံ့တွေ ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ လူ့ဘ၀ဖြစ်တယ်။
ထက်မြက်သူနဲ့နေချင်ရင် သင်ထက်မြက်ရလိမ့်မယ်။ထူးကဲသူနဲ့နေချင်ရင် သင်ထူးကဲရလိမ့်မယ်။
သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကွက်ကို အလွယ်တကူမြင်ပြီး ကိုယ့်အတွက်ခွန်အားအဖြင့်၊ သင်ယူစရာအဖြင့် ပြောင်း လဲမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင်ဟာ ထက်မြက်သူဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဘ၀ရဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုပြီး ကိုယ့်အခွင့်အရေးအဖြင့် ပြောင်းလဲမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင်ဟာ ထူးကဲသူဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ အောင်မြင် မှုကို ကိုယ့်အောင်မြင်မှုအတိုင်း ပြင်းပြမယ်။
သူတစ်ပါးရဲ့ အသိပညာကို ဆည်းပူးပြီး အောင်မြင်တဲ့ကိုယ် လုပ်မယ်။ မတူတဲ့လူနဲ့ အတူနေရင် မတူတဲ့ ဘ၀ကို ရပါတယ် ။
Posted by Winter Breeze
Posted by War war war.lovely at 2:49 PM